Iko kukanganisa kwezvekutengesa zvemagetsi mune ramangwana | ECommerce nhau
Zvemagetsi zvekutengeserana oe commerce yasvika nyika zhinji pasi rese nekuwana internet, uye ramangwana rayo rinoratidzika kunge rinotovimbisa, zvese nekuda kukura kukuru kugona kuti chishandiso ichi chakawana mumakore achangopfuura uye simba rekutengesa zvemagetsi mune ramangwana.
Pakutanga kwema20s, yakasimudzirwa mu United States kutengeswa kwezvigadzirwa nekatalog. Vatengesi vemuzvitoro vese vakarota vachisvika-kunze-kweguta vatengi uye vakagadzirisa indasitiri iyi nekugadzira inovaka mapikicha catalog kukwezva vatengi vatsva kubva kumwe kunhu.
E-commerce mune ramangwana
Makumi emakore mashoma mushure ma20s terevhizheni yakabuda, uye pamwe nayo, iyo kushambadzira kwakakurumbira kweterevhizheni, izvo zvinoita kuti indasitiri irambe ichienderera. Zvese iwe zvawaifanira kuita kufona uye kuisa odha yako. Pakutanga kwema90, maitiro ekusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi akawedzeredzwa zvakare. Kutenda kuInternet, mushandisi anogona ita zvaunotenga kubva chero kupi zvako pasi, pasina chikonzero chekubhadhara vashandi uye chero nguva yezuva.
Zvakatora terevhizheni makore makumi matatu nesere kusvika vashandisi mamirioni makumi mashanu, nhamba iyo internet yakasvika mumana chete, iine kukurumidza kukurumidza kwemashoko, ndiko kuti chakanakisa chekushambadzira chishandiso mumusika uripo wepasirese.
Muna 2005 zvakafanotaurwa kuti iyo e-commerce kukura kwaizove makumi mana muzana muSpain. Chakashamisa munhu wese, muna 2007 chakakura ne60%, izvo zvinoshandura kuita mutengo wekutengesa weUS $ 10,908,000, uye nenzira ino fananidzwa yakafanana e-commerce yanga ichikura kusvika wasvika padanho re simba nhasi.
Uye ndizvo zvatinoziva nezvazvo kunyaradzwa iyo inopa simba rekutenga chero nguva yezuva, kubva kumba kwako, kuchengetedzeka iyo system inopa, iyo kumhanya uye zvakasiyana zviripo ndeimwe yemapoinzi mazhinji mukufarira zvekutengeserana zvemagetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Iko kukanganisa kwezvekutengesa zvemagetsi mune ramangwana
Kukosha kweEcommerce muSpain